China PVC-U Amanzi Pipe nokufaka ifektri kanye nabaphakeli | UZhili
ipayipi lokwakha umphakathi
ipayipi elihambisa amanzi
ipayipi lokuhambisa amanzi
ipayipi lokuhambisa ugesi
ipayipi lokushisa phansi
ipayipi lokuhlobisa ikhaya
Steel-plastic Pipe esiyinhlanganisela
PVC-U Amanzi Pipe nokufaka
ipayipi lokuhambisa ugesi le-pvc
ipulasitiki-aluminium piep eyinhlanganisela
Pipe lokulinganisa Material
Isheduli Yokulinganisa / IsigabaAkukho Uhlelo
Usayizi wepayipi - I-Pipe Fitting6 in
Uhlobo Lokuxhuma Olulinganayo
UMax. IngcindeziAkulinganiselwanga Izicelo Zengcindezi
UMax. Isikhathi.73 Izinga F
IsiceloDrain, Ukusingathwa kanye Vent
SHRH UPVC Pipe Izinzuzo
Amandla Okugeleza Okuphezulu: Izindonga zangaphakathi ezibushelelezi nokungqubuzana okuphansi kokufakwa kwe-PVC-U kuphumela ekumelaneni kokugeleza okuphansi nevolumu ephezulu.
Ukumelana Ne-Corrosion: Izinto zokufaka amanzi ze-PVC-U azisihambisi zikagesi futhi zivikela ukusabela kwe-electrochemical okubangelwa ama-acid, izisekelo, nosawoti okubangela ukugqwala ezinsimbi.
Izindleko Zokufaka Eziphansi: Izinto zokufaka amanzi e-PVC-U zilula futhi zifakwe ngosimende kuphela, kanye nokuhlanganiswa okuhlanganisiwe. Ukulula kokufakwa kunciphisa izindleko zokufaka.
Impilo Yesikhathi Eside: Ukufakwa kwe-PVC-U kungasebenza iminyaka engaphezu kwengu-50 kusetshenziswe kahle.
Imvelo-friendly: Ukufakwa kwe-PVC-U kungenziwa kabusha.
SHRN UPVC ipayipi Izici
1.Incazelo: Ipayipi Lokuthulisa Elingenalutho
2.Izinto: i-polyvinyl chloride engaxutshiwe
3. Osayizi: 16mm ukuze 630mm
4.Imibala: imibala emhlophe neminye iyatholakala uma iceliwe
5.Uxhumano: isokhethi-spigot ngokuhlanganyela nosimende kuphela
6. Izinga: I-ISO 3633: 2002
Isiqinisekiso 7. ISO9001, ISO14001 ne-OHSAS18001
Izicelo: amanzi nendle
1.Sinamandla amakhulu we-r & d namandla wokulawula ikhwalithi. Inkampani yethu ingumhlinzeki wezinhlayiya ezihlanganisiwe ze-PVC ezinomlando weminyaka engaphezu kwengu-25. Sinamandla we-r & d namandla wokulawula ikhwalithi.
Le nkampani inamandla amakhulu ezobuchwepheshe, ukukhetha izinto ezinhle kakhulu, imishini esezingeni eliphakeme kanye nesipiliyoni sokukhiqiza esinothile.
3. Sine ezahlukene imikhiqizo.
4.Ungakhetha okuhlanganisiwe okulandelayo kwe-PVC:
Ngokusho kobulukhuni (obuqinile, obukhuni obuqinile, obuthambile), Ngokuya ngemisebenzi (ukwahlukanisa, ubufakazi bukawoyela, ubufakazi obubandayo, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukugqoka ukumelana, iphunga eliphansi, njll.).
5. Imininingwane eyenziwe ngezifiso ingahlinzekwa.
Langaphambilini ipayipi lokuhambisa ugesi le-pvc
Olandelayo: Ipayipi Lokuhambisa Amanzi le-PVC-U
Pipe Wall Amanzi Pipe
Pipe Wall Kuvunguza Pipe
PVC Amanzi Amapayipi nokufaka
Ipayipi le-Solid Wall Drainage
Solid Wall Kuvunguza Pipe
ipayipi eliqinile lokuhambisa amanzi odongeni
ipayipi elingenalutho lodonga lwamanzi
udonga olungenalutho ipayipi Kuvunguza
okuqinile udonga Kuvunguza ipayipi
Le nkampani ibilokhu inikelwe ekucwaningweni kwamapayipi okufakwa kanye nezikhunta ezahlukahlukene zepulasitiki iminyaka eminingi, igcina njalo ijubane nobuchwepheshe bamazwe omhlaba, obuphambili, ukuphathwa kobungcweti kudale ikhwalithi enhle kakhulu nomkhiqizo omuhle kakhulu.
Amadivayisi: No. 118-7, eMpumalanga yeShenzhen Road, Qingjiangpu District, Huaian City
© Copyright - 2019-2021: Wonke Amalungelo Agodliwe.